11 Mazano eKunyatso Kushambadza App Yako Kuti Uwedzere Kudhawunirodha - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
App Kuita Mari, Digital Marketing, Kushambadzira kwenhare
11 Matipi Ekukwikwidza Zvakakwana App Yako Kune Mamwe Kurodha
Panyaya yekureruka, Mobile Apps ndicho chinhu chikuru kubva pachingwa chakachekwa. Vashandisi havachafanirwa kuenda kuburikidza nekuita mhepo yekuvhura browser, kunyora iyo URL, uye kumirira kuti webhusaiti itakure. Nekukurumidza kubaya pane yako smartphone, unogona kuvhura app mukati memasekondi.
Zvirongwa zvinoita chinzvimbo chakachinjika mukugadzira musono, kusimudzira zvigadzirwa, uye kuona iri nani ruzivo rwevatengi. Zvakare, hungave upenzi kuregeredza chokwadi chekuti vanopfuura makumi mapfumbamwe muzana vehuwandu hwepasi rese internet vanoshandisa nhare mbozha kubhurawuza.
Kazhinji mawebhusaiti haateerere kune zvidiki zvidiki uye zvinotungamira kune inoshungurudza ruzivo rwevashandisi. Zvirongwa zvinowirirana zvakanyanya nemidziyo inobatwa nemaoko.
Tichifunga nezve kuwanda kwezvakanakira, makambani haasi kudzora kana zvasvika pakugadzira maapplication. Uye ndosaka paine 1.96 mamirioni uye 2.87 mamirioni maapplication anowanikwa kurodha pasi paApp Store uye Play Store, zvichiteerana.
Uri kutambura kukurudzira vanhu kuti vatore download yako app mumusika uyu wakazara? Hedzino dzimwe nzira dzakaratidzirwa dzekutengesa yako app uye kusimudzira kurodha pasi.
1. Teerera Kutarisa kune App App & Branding
Iri zita rakaomarara rinogona kuita kuti chako kuve chinonetsa kuyeuka nekuwana. Iwe unofanirwa kusarudza zvinehunyanzvi zita rinoenderana nechako uye nekunyengera rinosanganisira rakakosha kiyi. Sezvineiwo, zita reapp rinofanira kuve rekugadzira asi riri nyore.
Saizvozvo, zvakakosha kuti utarise pakugadzira iyo icon yeapp. Sezvo icon iri chinhu chekutanga chinoonekwa nemushandisi, inofanira kunge ichinakidza.
2. Vaka SEO-Optimized Webhusaiti & Blog
Munyika yanhasi yedhijitari, munhu anogona kutsvaga chigadzirwa kana sevhisi pamhepo. Iwe unogona kuona kuti yako app iri nyore kuwana nekuibatanidza kune webhusaiti kana blog. Iyo webhusaiti kana blog inofanirwa kukwidziridzwa zvinoenderana neSEO maitiro akanaka ekusimudzira kuoneka.
Kuva nehupo hwepamhepo hwakakosha kana iwe usiri kuda kurasikirwa nenhamba yakakosha yevateereri vako. Iwe unogona kushandisa blog kugovana maapplication ekuvandudza uye kugadzirisa, matipi uye sei-tos, nezvimwe zvinowirirana zvemukati kune vateereri vako.
3. App Store Optimization Yakakosha
zhinji Developers ita chikanganiso chekutarisisa AOS. Zvakafanana neSEO, iwe unofanirwa kutarisa App Store Kuita (AOS) kusimudzira kuoneka kweapp yako. AOS inosanganisira kugadzirisa zvinhu zvakasiyana siyana senge mifananidzo, mazwi akakosha, tsananguro, zvichingodaro.
Hezvino zvinhu zvishoma zvekufunga nezve inoshanda AOS:
Nekuchenjera sarudza zvikamu zvinonyanya kukosha kune yako app. Iwe ucharasikirwa neako tarisiro vateereri kana ukasarudza zvisirizvo zvikamu.
Paunenge uchinyora zita reapp uye tsananguro, ita shuwa kuti unosanganisira akakosha mazwi akakosha. Nekudaro, rega kubva kukiyi yekuisa zvinhu.
Nyora rondedzero uye zita mumutauro unoshandiswa zvakanyanya munzvimbo inowanikwa vazhinji vavateereri vako.
Zvingave zvine hungwaru kudyidzana nevashandisi vako uye nekukurumidza kupindura kune chero nyaya kana mibvunzo.
4. Shandisa Mhando yepamusoro-Mifananidzo
Ese maficha ezvekunyorwa pane chitoro cheapp anofanirwa kunge ari mushe. Iri izano rakanaka rekuwedzera zvemhando yepamusoro mapikicha uye mapikicha eapp rako kupa vashandisi peek mune izvo zvinoitwa neapp uye mashandiro ayo. Kunyangwe usati waverenga rondedzero kana wongororo, vashandisi vazhinji vanoenda vakananga kumahwindo. Zviratidzo zvinotora basa rakakosha mune rekupedzisira sarudzo yekurodha pasi.
5. Gadzira Inodzidzisa Vhidhiyo
Haasi ese maapp anonanga uye ari nyore kuona. Kana iwe wagadzira app ine niche chinangwa, ita shuwa kuti iwe unopa ruzivo rwakakwana kuitira kuti vateereri vako vatange nyore kuishandisa. Kugadzira vhidhiyo inotsanangudza ichisimbisa ako akakosha maficha maficha uye mabhenefiti kunobatsira vateereri vako kuve neruzivo rwakanaka kana uchitanga nechigadzirwa chako.
Rangarira kuwedzera iyi vhidhiyo kune yako app chitoro chinyorwa pamwe ne evanhu vezvenhau mapuratifomu uye webhusaiti.
6. Shambadza paSocial Media
evanhu vezvenhau mapuratifomu ave akakosha mukusimudzira zvigadzirwa nemasevhisi. Zvinogoneka kuti iwe unogona kunge usina bhajeti kana nguva yekugadzira webhusaiti izvozvi. Asi iwe uchiri kugona kuvaka huvepo hwepamhepo kune yako app ne evanhu vezvenhau.
Sezvo isu tichiziva, kune hwakawanda hwakawanda hwe evanhu vezvenhau mapuratifomu akadaro Instagram, Twitter, Pinterest, Facebook, zvichingodaro. Panzvimbo pekuvajuja vese, iwe unofanirwa kutarisa pamatanho anonyanya kukosha kuindasitiri yako.
Semuenzaniso, kana iwe uri mubhizimusi reB2B, LinkedIn ipuratifomu ine simba yekusvika kune vakawanda vateereri. Gadzira yechokwadi bhizinesi profiles uye dzidza maitiro ekugadzirisa mameseji paLinkedIn nekubatanidzwa zvirinani.
7. Kurudzira Mushandisi Mhinduro, Ratings & Ongororo
Kuongorora kwevatengi ndiko kufarirwa kwedhijitari kunogona kukanganisa chirongwa chako kuti chibudirire. Vazhinji vashandisi veinternet vanoongorora ratings uye ongororo vasati vatora app. Zvakare, mhinduro inovaka inogona kukubatsira iwe kugadzirisa zvakanyanya-kudikanwa kune ako maapp.
Naizvozvo, zvakakosha kukumbira vashandisi kuti vaongorore yako app vachishandisa in-app mameseji. Izvo zvataurwa, dzivisa kuputira vashandisi nezvizhinji zvakawandisa kukumbira mhinduro.
8. Shandira pamwe neMicro & Macro Influencers
Vafuridzi ndivo maA-zvinyorwa zve evanhu vezvenhau kushambadzira. Kubatana nevanokurudzira kukurudzira purogiramu yako kuvateveri vavo inzira inoshanda yekuwedzera kurodha pasi.
Iwe haudi hako hombe bhajeti yeanokurudzira kushambadzira. Micro-vanokurudzira vane vateveri vadiki asi vateveri vanogona kukwikwidza kurodha pasi kwako.
9. Usarerutse Kutengesa neemail
Email kushambadzira ichiri imwe yenzira dzinoshanda uye dzinodhura yekusimudzira yako app. Ndosaka zvakakodzera kuwedzera fomu yekusaina-pawebhusaiti yako kuti uvake yako email rondedzero. Nekudaro, iwe hausvike kure nekungotumira email kamwe chete bhuruu mwedzi.
Kuchengeta vashanyi vako vachifambidzana nemaemail akakosha uye emhando yepamusoro inzira inoshanda yekusimudzira kurodha pasi. Kubatana chinhu chakakosha kuti unyatso shandura zvinotungamira.
10. Gadzira Media Buzz
Iwe unofanirwa kubata online zvinyorwa uye maindasitiri nyanzvi kuti uongorore yako app. Iko hakuna chokwadi chekuti vachazviita, asi zviripo kupfura. Kuongororwa nenzwi rakavimbika reindasitiri kunounza buzz yeapp yako.
11. Ongorora Niche Networks Yekushambadzira
Kana chako chishandiso chisiri chikuru, iwe unofanirwa kuona nzira chaidzo dzekushambadzira. Panzvimbo pokutambisa nguva papuratifomu umo mikana yekubudirira ishoma, edza kushambadzira pane imwe niche.
Semuenzaniso, mapuratifomu akaita seReddit neQuora akanaka mukutarisa niche nharaunda.
Nekudaro, iwe unofanirwa kuve nekuchenjerera nezve kushandisa aya mapuratifomu. Kukurudzira pachena pane kuwedzera kukosha kunharaunda kunogona kukutadzisa.
Ungave uri kuronga kutanga varaidzo kana eCommerce app, rangarira kuti imusika une makwikwi anotyisa. Kunyangwe yakanyatsogadzirwa app inopa pfungwa yakanaka inogona kutadza pasina akakodzera ekusimudzira maturusi. Kutarisa pa kushambadzira yekushandisa kwako kubva pazuva rekutanga kunobatsira kunatsiridza kubudirira kwayo uye kuwedzera kurodha pasi. Ndinovimba, iwe unogona kuzadzisa izvo nematipi ataurwa pamusoro.